Wararkii Ugu Dambeeyay Shirka Dowladda Federaalka Iyo Dowlad Goboleedyada – Great Banaadir
Dowladda Federaalka, Dowlad Goboleedyada iyo Gobolka Banaadir ayaa magacaabay guddiyo min laba xubnood ah, kuwaa oo yeelanaya shir horudhac u ah shirka uu 15-ka bishan ku baaqay Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Xubnahan ayaa waxaa lagu wadaa inay Axadda berrito ahi ku kulmaan Magaalada Baydhabo, si ay uga arrinsadaan doodda ka dhalatay halka ay tahay in lagu qabto shirka uu ku baaqay Madaxweynuhu.
Madaxweynaha ayaa Talaadadii ku baaqay in dhinacyada ka soo qaybgalaan shirkaasi, oo sida uu iclaamiyay ka furmi doono Magaalada Garoowe, ha ahaatee ay Puntland ka biyo diiday. Puntland ayaana soo jeedisay in shirka lagu qabto Caasimadda Muqdisho, isla-markaana ay ka soo qaybgalaan dhammaanba dhinacyada siyaasadda.
Maamulka Jubbaland, Gudoomiyaha Golaha Aqalka Sare, Cabdi Xaashi Cabdullaahi iyo Golaha Midowga Musharaxiinta ayaa taageeray soo jeediinta Puntland, ee ah in shirka lagu qabto Muqdisho, kana soo qaybgalaan danleyda siyaasadda.
Beesha Caalamka ayaa maanta ku baaqday in madaxdu xal ka gaaraan doodda ka dhalatay goobta lagu qabanayo shirka ugu dambeeyay, ee looga gudbayo khilaafka wiiqay arrimaha doorashooyinka ee dalka.
Ilo wareedyo ayaa sheegaya in shirka uu 15-ka bishan oo Isniinta soo socoto ku beegan ay u badan tahay inuu ka dib dhici doono xilligaasi, haddii aanay dhinacyadu isu tanaasul iyo biseyl siyaasadeed muujin.
Wararka ayaa sheegaya in Madaxda Dowladda Federaalka, Dowlad Goboleedyada iy Gudoomiyaha Gobolka Banaadir ay diyaar u yihiin in shirka wadatashiga ka wada qaybgalaan, balse ay ku kala aragti duwan yihiin halka lagu qabanayo.
Labada dhinac ayaa weli u muuqdo kuwo ka gows-adeegaya in shirka lagu qabto Magaalooyinka Garoowe iyo Muqdisho, midkood. – Universal TV Somali